Nhau - Shandong Huiyang Viwanda Co, Ltd Spray Kugadzira Mutsetse Wekutanga Mhemberero.
Shandong Huiyang Viwanda Co, Ltd Mwaya Kugadzira Line Mutsetse Wemhemberero Zvakatanga Zvakatangwa.
Wako mutengesi uye mudiwa muChina yemhando yemapuranga bhokisi / mhizha.
Sept 3, nemukuru wekambani maneja Wang Yang pachake akatanga bhatani rekushandisa, muchina unodzvova, chigadzirwa kuvhurwa, SHANDONG HUIYANG INDUSTRY CO., LTD pfapfaidzo yekugadzira mutsara wekutanga mhemberero zvakatanga zviri pamutemo. SHANDONG HUIYANG INDUSTRY CO., LTD pendi pfapfaidzo yekugadzira mutsara mutsetse watanga kugadzirwa! Kupedzwa uye kutumirwa kwetambo yekugadzira inoratidzira SHANDONG HUIYANG INDUSTRY CO., LTD kupaza kuburikidza nekuvandudzwa kwechinangwa chikuru, nhanho yakasimba kumberi! Iyi tambo yekugadzira parizvino ndiyo yemhando yepamusoro michina, kushandiswa kweiyo set-up cheni yekufambisa system, kumeso kushanda, kuvimbika kwakanyanya. Ziva iyo otomatiki marara ependi zvinhu, simba-yekuchengetedza mhedzisiro iri pachena, maitiro ekudzora akatsiga, chigadzirwa chemhando chakavimbiswa. Uye kuderedza kusvibiswa, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye kuvimbika. Iyo yekuzadza gasi kurapwa sisitimu nyowani yekupenda sisitimu inotora yakaparadzanisa nzira yekuunganidza yega yega yekupfira kamuri, iyo yekugadzirisa maitiro yakafambiswa, nemvura mhute yekumwaya - kusefa - UV photolytic kurapwa - yakamisikidzwa kabhoni adsorption uye imwe yakawanda-danho kurapwa, kuzadzisa iyo standard emissions, kusangana nezvakatipoteredza kuchengetedza zvinodiwa. Pazuva rechinoitika, cao County mataundishipi vatungamiriri pamatanho ese kutungamira nekutora chikamu mumhemberero yekuvhura.
Dare rebato rekanzuru nehurumende vakakorokotedza fekitori yedu kutanga kwekupfira kugadzirwa kwemutsara, uye vakaratidza kuzivikanwa kuzere kweSHANDONG HUIYANG INDUSTRY CO., Kubudirira kwenguva yakareba kweLTD mukusimudzira hunyanzvi-hunotungamirwa, kuomerera kushanduko yetekinoroji uye kukwidziridzwa iyo nzira yekusimudzira. Wu Zhen anotarisira kuti Gumei achaedza kusimudzira uye nekupa mipiro mikuru mukusimudzira nzanga yemuno kana chirongwa chitsva ichi chaitwa.
"Pasi pekumanikidzwa kwepasi kwekudiwa kwepasi uye kuwandisa kwepamusoro, hupfumi chaihwo hwakarohwa uye hwakapikiswa zvisati zvamboitika, uye SHANDONG HUIYANG INDUSTRY CO., LTD yakasanganawo nematambudziko mazhinji nemiyedzo," akadaro Li pamusangano wekutanga. Nekudaro, pasi pekutarisirwa kwevatungamiriri pamatanho ese, nerutsigiro nerubatsiro rweshamwari kubva kumativi ese ehupenyu, SHANDONG HUIYANG INDUSTRY CO., LTD inoramba kumanikidza, inokwira kumusoro, nemweya usingatyi, inogadzira mamiriro matsva e budiriro, inoridza RWIYO rwe SHANDONG HUIYANG INDUSTRY CO., LTD hunhu hweKushanda. "
Secretary Li akati kupedziswa uye kutumirwa kwetambo yekupfapfaidza kwakavhura chitsauko chitsva mukuvandudza kwe SHANDONG HUIYANG INDUSTRY CO., LTD, chiitiko chakakosha munhoroondo yekuvandudza kwezvirimwa. Izvi zvakakosha kwazvo kuona mhando yechigadzirwa, kupfupisa nguva yekuendesa, kudzikisa mutengo wekugadzira, kugadzirisa kugona kwekugadzira uye kuwedzera kukwikwidza kwemabhizinesi.
Seiri mhepo yekutyaira yakanaka, akashinga mafungu musoro chakatsva chinyorwa chinyorwa! Mukushevedzera kweboka “kwemwedzi mitatu”, timu yakaratidza hunhu uye mweya wakanaka. Iyo yepamutemo kutanga-kumusoro kweiyo yakatwasuka yekumwaya yekugadzira mutsara ichapa mapapiro akasimba eSHANDONG HUIYANG INDUSTRY CO., LTD's kutora-kure
Post nguva: Dec-16-2020
Kwete 6 BaoTuQuan North Road, Jinan, China